Welthungerhilfe: Raad ku-reebid – Welthungerhilfe
Diiwaangelinta Maxkamadda: Bonn
Lambarka Isdiiwaangalinta: VR 3810
Lambarka Aqoonsiga VAT: DE812801234
Welthungerhilfe waxaa loo aqoonsaday inuu yahay urur aan faa'ido doon ahayn oo ay u aqoonsatay xafiiska canshuuraha ee Jarmalka; waa laga dhaafay canshuuraha dakhliga.
Gudiga Fulinta ee Mushaharka Qaata
Xoghayaha Guud: Mathias Mogge
Madaxa Xisaabaadka: Christian Monning
Isgaadhsiinta Dijitaalka Ah
Taleefan: +49 (0) 228-2288 0
Faakis: +49 (0) 228-2288 333
Taleefan: +49 (0) 30-288749 11
Faakis: +49 (0) 30-228749 19
Xuquuqda daabacaadda sawirrada ee ah www.welthungerhilfe.org
Xuquuqda daabacaadu waxa ku jira sharaxa sawirka ee sawir qaadayaasha dibadaha ama shaqaalaha Welthungerhilfe. Welthungerhilfe had iyo jeer waa mulkiilaha sharciga ah ee sawirrada iyaga oo aan lahayn macluumaadka xuquuqda daabacaadda oo lagu soo bandhigo websaydka.
In kasta oo aan si taxaddar leh u eegno dhammaan waxa ku jira, haddana annagu ma qaadno wax mas'uuliyad ah wixii ku jira xidhiidhada dibadda ah. Waxyaabahan dibadda ah waa mas'uuliyadda kaliya ee hawlwadeennada bogagga xidhiidhka la leh.
Diidmada adeegsiga xogteena
Waxaan si cad u diidanahay adeegsiga saddexaad ee macluumaadka xidhiidhka, ee la daabacay iyadoo la raacayo waajibaadka saaran ee bixinta astaanta, iyadoo ujeedadu tahay gudbinta xayeysiinta aan la codsan iyo macluumaadka xogta. Hawlwadeenada bogaggan waxay leeyihiin xuquuq ay ku qaadayaan tallaabooyin sharci ah haddii ay dhacdo gudbinta macluumaadka aan la dalban xayeysiiska, sida e-maylada la isku dhaco.